Kedu mgbe ndị ahịa na-adị njikere ịkekọrịta data ha? Ego ole? Y’oburu n’aghotaghi ya ugbua, Europe n’eduba uzo n’agha data na ihe nzuzo. Iwu ha siri ike karịa ma ha na-akachasị arụ ọrụ nke usoro ijide data. North America na-agbadata ntakịrị oge na anyị nwere ọtụtụ àgwà laissez-faire - na-anakọta ọtụtụ ihe ma na-eji obere ya. Ndị ahịa dị njikere ịkekọrịta ozi